Gbasara Anyị | Amso Solar Technology Co., Ltd.
Amso Solar Technology Co., Ltd.bụ onye na-emepụta oghere igwe nke mepụtara kemgbe afọ iri na abụọ. Anyị nwere ahụmịhe zuru oke na ọrụ OEM na ODM. N'ime afọ ndị gara aga, Anyị eguzobewo ụlọ ọrụ siri ike na ọtụtụ ụdị na ndị nrụpụta ọkwa. E hiwere anyị na 2017 iji weta akara anyị: Amso Solar. Factorylọ ọrụ anyị dị n'akụkụ Ọdọ Mmiri HongZe mara mma, nke dị na Huaian, JiangSu, China.
Amso Solar mere nke oma n’oru ocha nke igwe na igwe n’ahu site na afọ iri-abuo na ise. Ihe ndị anyị na-emepụta na mbara igwe na-ekpuchi usoro 5BB na 9BB, ike dị ọtụtụ site na 5w ruo 600w, ma mechie ogwe osisi ndị ahaziri iche, dozie ogwe ọkụ na ọkara sel. N'ihe nha sel, anyị na-etinye sel sel atọ dị n'igwe nzụpụta: M2 156.75mm, G1 158.75mm na M6 166mm.
Iji mezuo ahụmịhe ịzụ ahịa nke otu ndị ahịa, anyị mepụtara azụmaahịa ọzọ iji nyekwa usoro sistemu nke anyanwụ, dịka PWM na onye njikwa MPPT, acid acid, gel na lithium batrị, grid na on-grid inverter, ngwa ntinye. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-enyekwa usoro ọkachamara ọkachamara na kesaa ọrụ nke sistemu ike anyanwụ na-ejikọ ma na-apụ.
Iji chọpụta ahịa zuru ụwa ọnụ, anyị enwetawo ụfọdụ asambodo iji nweta ihe ruru eru dị iche iche dịka CE, TUV, CQC, SGS, CNAS. Anyị na-edebe ụkpụrụ dị elu nke nhọrọ ihe, webata ngwa ọrụ dị elu n'ụwa niile, ma na-emezigharị usoro njikwa mma iji hụ na ngwaahịa ọ bụla sitere na Amso Solar ruru eru. Ngwunye modulu anyị kwa afọ ruru 1 0 0 megawatt. Anyị isi ahịa mejupụtara anụ ụlọ, Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Europe na Mid-East.
Ọhụụ anyị bụ ịgbasa ngwa nke ike anyanwụ ma mee ka ojiji nke akụ ọhụrụ a kwe omume. Anyị kwenyere na Mmekọrịta azụmahịa ga-eweta abamuru ga-erite uru ma chọọ ịchọ nkwado ogologo oge. Amso Solar ji ezi obi na-acho nyocha gi ma dịkwa njikere inye ihe ngwọta ike anyanwụ.